Promthep Cape Views Point ~ Journey-Assist - mahaliana ..
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Phuket » Promthep Cape Views Point
Promthep Cape Views Point, Phuket
Famaritana ny Promtep Cape any Phuket. Vidin-javatra.
Cape Promtep amin'ny sarintany. Ahoana no hahatongavana any.
Saripika sy horonan-tsary avy amin'ny alàlan'ny fitsikilovana ny Cape Poomtep
Hevitra momba ny fahazoan-dàlana ao amin'ny Promtep Cape, Phuket (valin'ny Google)
Hevitra ho an'ny Promtep Cape any Phuket (Tripadvisor.ru)
Ity deck fanaraha-maso ity no tena malaza amin'ny Phuket!
Cape Promtep no farany atsimon'i Phuket.
Ity toerana mahafinaritra ity dia tsy maintsy tafiditra ao amin'ny fitsangatsanganana an-dry Phuket fitsangatsanganana rehetra.
Eto ianao dia afaka mankasitraka ny fomba manaitra ny ranomasina misokatra, ny morontsiraka ary Nai Harn Beach. Misy olona foana foana - na mpizahatany na eto an-toerana. Ny hariva, ny mpizahatany tonga eto amin'ny bus rehetra mba hankafy ny tara-masoandro, izay mahagaga fotsiny eto!
Fitaovana tsara ny tranokala, misy ihany koa ny tranobe kely misy groceries sy trano fisakafoanana sy trano fisakafoanana maromaro, izay manome panjanonana mahafinaritra ihany koa.
Misy ihany koa ny jiro Kanjanaphisek miasa ary tranombakoka mini an-dranomasina miraikitra ao aminy.
Filentehan'ny masoandro ao Promtep Cape
Aza hadino fa ao Phuket, ny filentehan'ny masoandro dia midina amin'ny elanelan-potoana. from 17.30 to 18.30 ary mandeha haingana be, maharitra maharitra tsy mihoatra ny 10 minitra.
Avy eto ianao dia afaka midina any Promtep Cape, izay ahafahana mankasitraka ny tany mahavariana be kokoa any amoron-tsiraka, na izany aza, ny fianjerana eto dia tsy dia mandeha tsara ary ny voanio dia matetika voasasa amin'ny onja lehibe, ka tsy azo antoka loatra ny hivoahana azy. Fa ny mandin'izany dia mendrika, ny fijerena avy ao. Ary koa, raha milamina ny ranomasina, dia mazava tsara ny rano eto ka afaka mahita trondro, corals ary toetra hafa an-dranomasina.
Te hanoro hevitra ny hitsidika io sehatra fanaraha-maso io tsy ho isan'ny fizahan-tany. Hatramin'ny 20-30 minitra dia natokana nandritra ny fitsidihana, mazava ho azy fa tsy ampy ny mahita ny zava-drehetra ao ary alainy sary ny sary rehetra.
Raha mitsidika anao, raha sambany, manoro hevitra izahay ny hametraka adiny iray sy sasany na roa.
Teny an-dalambe avy amin'ny toeram-piantsenana dia tsena kely izay misy kely ny zavatra rehetra. Ary souvenir, sakafo, sy kojakoja vita amin'ny akanjo. Ary ny vidiny eto dia mahatoky, farafaharatsiny momba ny vidiny any Patong, na Karon.
Amin'ny toeram-pandinihana ihany dia misy tempoly kely ihany ary sarivongana iraisan'ny elefanta sy ny elefanta maro samy hafa.
misy ny drawback amin'ity toerana ity. Tena be mpitia, satria eto mandritra ny andro ary indrindra mandritra ny filentehan'ny masoandro dia be olona be.
Ny fomba fiasa amin'ny sehatra fanarenana
Afaka tonga amin'ny tranokala amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny andro rehetra ianao. Eo ihany koa ny tranom-bakelom-parola, izay misokatra amin'ny 8 ka hatramin'ny 19.
Ny saram-pidirana, ary koa ny saram-piantsonana, dia tsy voaloa.
Ahoana no hahatongavana any. Aiza
Ity tranonkala ity dia hita ao amin'ny faritra atsimon'ny Phuket, tena akaikin'ny lalana 4233 akaikin'ny Nai Harn Beach. Avy amin'ity tora-pasika ity ianao dia afaka mandeha, afaka miakatra avy any amin'ny toerana rehetra eto amin'ny nosy ihany koa amin'ny fiara / bisikileta na taxi-be, na mandefa fitsangantsanganana.
Address: Rawai, Distrikan'i Mueang Phuket, Phuket, Thailand
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https://goo.gl/maps/dqoxj1MJpmXjG2VJ8
Promthep Cape Views Point eo amin'ny sarintany
Promthep Cape Views Point, Phuket. Sary sy horonan-tsary
Hevitra momba ny fahazoan-dàlana ao amin'ny Promtep Cape (famerenana Google)
Hevitra momba ny fahazoan-dàlana ao amin'ny Promtep Cape (Tripadvisor.ru)
Toerana tsara! Mahavariana ny fomba fijery!
Avy amin'ireo soso-kevitra:
1. Aza maloto loatra hidina eny am-pototry ny kaontina
2. Aza adino ny mandehandeha eto (tsy amin'ny fitsangatsanganana), satria amin'ny fomba tsara dia mila adiny roa ianao raha te hahita ny zava-drehetra eto.
3. Ny olona kely indrindra eto maraina. Ary amin'ny tolakandro sy ny hariva dia tahaka ny eny an-tsena amin'ny ora maika.
4. Tsenam-barotra eo akaikin'ny toeram-pivarotana miaraka amin'ny vidiny tsy mivadika. Ny gilasy iray izay mitentina 100 baht ao Patong dia 20 baht. Saron-kena, scarves, souvenir ary fako hafa dia mora kokoa ihany koa.